Saldhigyada Cimilada ee ugu Fiican Oregon | Saadaasha Shabakadda
Waxaa jira dad jecel saadaasha hawada oo jecel inay ogaadaan dhammaan qiyamka is-beddelka cimilada, saadaaliya cimilada ama ogaadaan waxa dhaca mar walba. Tan awgeed, waxaa jira waxyaabo kala duwan xarumaha cimilada in guriga lagu haysto Ilaa maanta, shaki la'aan, saldhigyada ugu wanaagsan ee cimilada ayaa ah Oregon Scientific. Qalabkani waa mid aad wax ku ool u ah, waxay leeyihiin shaqeyn weyn iyo tikniyoolajiyadda guriga naga caawisa waa mid kacaan badan.
Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa faa'iidooyinka iyo astaamaha saldhigyada cimilada ee Oregon Scientific.
1 Astaamaha ay tahay in rugta cimilada ay lahaato
2 Maxay Oregon Scientific u tahay summad wanaagsan
3 Moodooyinka Saldhigga Cilmiga Oregon ee ugu Fiican
3.1 Oregon Sayniska BAR208HG
3.2 Oregon Sayniska BAR206
3.3 Oregon Sayniska BAR218HG oo leh Isku xirka Wireless
Astaamaha ay tahay in rugta cimilada ay lahaato
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan kuu sheegno waa waxa rugta cimiladu u baahan tahay inay noqoto mid tayo fiican leh. Sidan oo kale, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato haddii astaanta Sayniska Oregon runti ay fiicantahay iyo inkale. Saldhigyada saadaasha hawada ee sumaddan waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin noocyo aasaasi ah. Tan waxaa ugu wacan qiimaheeda oo hooseeya.. Caadi ahaan, waxay kudhowaad yihiin inta udhaxeysa 30 iyo 80 euro, sidaa darteed waa kuwo la awoodi karo. Tani waxay ka dhigeysaa mid muhiim u ah kuwa lagu bilaabay saadaasha hawada, maadaama lacag yar ay ku raaxeysan karaan astaamo aad u xiiso badan kuwa lagu bilaabay saadaasha hawada.
Way ku habboon yihiin kuwa wax ka baranaya qaybtan sayniska oo doonaya inay hubiyaan waxbarashadooda, qiyaasaan qiyamka bey'adeed, si ay hadiyad ugu siiyaan qof ama qof u baahan inuu xakameeyo isbeddellada saadaasha hawada ee shaqada ama safarka. Iyagu waa saldhigyo ku habboon in lagu haysto guriga.
Kuwani waa sababaha ugu waaweyn ee keenaya in rugta cimilada ee guriga ay wax badan ka caawin karto.
Waxay kaa caawinayaan ogaanshaha xaaladaha deegaanka gudaha iyo dibedda guriga. Sidan ayaan ku qorsheyn karnaa safarada qaarkood ama aan ku ogaan karnaa qiyamka isbedelada saadaasha hawada.
Waad ku mahadsantahay xaqiiqda ah inaan ognahay qiimaha doorsoomayaal badan, waxaan ku keydin karnaa tamarta kuleylka iyo qaboojinta labadaba. Waqti iyo tababarba, waxaan awoodi doonnaa inaan ogaanno waxa ugu habboon ee jawiga deegaanku yahay si raaxada aan u baahannahay ay u noqoto dammaanad wanaagsan. Sidan ayaan ku heli karnaa xaalado wanaagsan oo gudaha ah oo qiimo jaban leh.
Ka caawi qorshaynta maalinteenna maanta mahadnaqidda saadaasha ka jirta meelaha maxalliga ah. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu doorto nooca dharka aan xiran doonno ama howlaha la qaban karo mar walba.
Iyada oo la xakameynayo heerarka qoyaanka deegaanka, Waxay naga caawin kartaa inaan iska ilaalino muuqaalka cudurada qaarkood ama caaryada la xiriirta huurka.
Waxaan awoodi doonaa inaan ogaanno heerkulka saxda ah gudaha iyo dibedda guriga si aan u qabanno howlaha lagama maarmaanka ah.
Way fiicantahay in caruurta mustaqbalka wax laga barto cilmiga saadaasha hawada.
Maxay Oregon Scientific u tahay summad wanaagsan
Xaqiiqdii, markii aad aqriso waxtarka saldhigga cimilada guriga, waxaad isweydiineysaa sababta Oregon Scientific ay u tahay sumcad wanaagsan. Shirkadan asal ahaan ka soo jeeda Mareykanka ayaa shaqeysay sanadkii 1997. Waa shirkad u heellan soo saarista waxyaabaha elektarooniga ah sida saacadaha, idaacadaha, xarumaha cimilada, kormeerayaasha feejignaanta dadweynaha, aaladaha kale ee lagula soconayo isboortiga, IWM
Waxay caan ku tahay hal-abuurnimada ay ku samaysay saldhigyada cimilada ka dib markay awood u yeelatay inay ku qabato macluumaadka iyada oo la adeegsanayo astaamaha raadiyaha FM ee MSN Direct, helitaanka saadaalinta ilaa 4 maalmood. Soo-saarahaani wuxuu ku sharaddeeyay hal-abuurnimo nooc kasta oo alaab ah si uu macaamiisha ugu soo bandhigo tikniyoolajiyadda ugu casrisan uguna wax-ku-oolsan xilliyada guriga.
Xaaladda saldhigyada cimilada, waxay had iyo jeer bixiyaan noocyo kala duwan oo saldhigyo cimilo aasaasi ah, aalado naqshadeeyayaal ah iyo saldhigyo cimilo loogu talagalay xirfadleyda.
Moodooyinka Saldhigga Cilmiga Oregon ee ugu Fiican
Waxaan dooneynaa inaan falanqeyno qaar ka mid ah moodooyinka ugu waaweyn uguna iibsiga wanaagsan ee nooca Oregon Scientific:
Oregon Sayniska BAR208HG
Waa mid ka mid ah moodooyinka ugu iibinta fiican maxaa yeelay isku dar naqshadeynta, shaqeynta iyo qiimaha hal shey. Waxaa ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee aan leenahay:
Gudaha iyo dibedda heerkulka / huurka iyada oo loo marayo dareemayaal dibedda ka mid ah.
Heerkulka heerkulka -5ºC ilaa 50 ºC
Xallinta 0,1 ºC (0,2 ºF)
Qiyaasta qoyaanka 25% - 95%
Xalka qoyaanka 1%
Waxaa loo sameeyaa nooc kasta oo guri ah ama in la dhigo qol kasta. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa qolalka kulanka, xafiisyada, xafiisyada, jikooyinka, dukaamada waaweyn, dukaamada, iwm. Meelahan waxay noqon kartaa mid xiiso leh in lagu cabiro doorsoomayaasha si ay u awoodaan inay hagaajiyaan raaxada iyo keydinta tamarta kuleylka iyo qaboojinta labadaba. Waxay sidoo kale ku habboon tahay dadkaas doonaya inay bilaabaan saadaasha hawada oo doonaya inay ku ogaadaan cimilada muddo gaaban.
Oregon Sayniska BAR206
Saldhiggan cimilada ayaa xoogaa ka fudud oo loo tixgeliyaa inuu yahay baaxad aasaasi ah. Way ku habboon tahay kuwa go'aansada inay iibsadaan saldhigga cimilada markii ugu horreysay. Qiimaheeda badanaa waa qiyaastii 60 euro. Naqshadeedu waxay ku habboon tahay qol kasta oo guriga ku yaal. Thanks to shaqooyinkeeda waxaan awoodi doonaa inaan ogaano macluumaadka ku saabsan heerkulka, qoyaanka qoyaanka ah, digniinta cimilada iyo Waad sii saadaalin kartaa cimilada 12 ilaa 24 saacadood ka hor inta u dhexeysa 30 ilaa 50 kiilomitir gacan ah.
Hawlaha aasaasiga ah oo dhammaystiran. Gudaha iyo Dibadda Heerkulka / huurka.
Naqshad casri ah oo casri ah.
30 mitir daboolida gudbinta
Qiyaasta qoyaanka ee u dhexeeya 25% iyo 90%
Waxay taageertaa illaa 3 dareemayaal heerkulka / huurka
Oregon Sayniska BAR218HG oo leh Isku xirka Wireless
Saldhigan cimiladu waa mid ka mid ah moodooyinka ugu casrisan uguna macquulsan ee shirkaddani leedahay. Waxay leedahay waxyaabo u gaar ah oo ka duwan kuwa kale. Tusaale ahaan, waad kula xiriiri kartaa iyada oo loo marayo barnaamij ku saabsan casriga. Halkaas waxaad ka heli kartaa macluumaadka cimilada ee saldhigga iyo dareemayaal kala duwan oo aad ku xirmi karto. Waxaad sidoo kale ku xirmi kartaa adigoo adeegsanaya Bluetooth illaa masaafo dhan 30 mitir.
Heerkulka iyo huurka.
Taariikhda ilaa 7 maalmood.
Xiriirinta iyo la-tashiga xogta iyada oo loo marayo barnaamijka loogu talagalay Android iyo Apple.
Waxay awood u leedahay inay ku xirto ilaa 5 aalad.
Ahaanshaha mid aad u xeel dheer, qiimaha ayaa xoogaa kor u kacaya. Si kastaba ha noqotee, sidoo kale waad iibsan kartaa haddii aad tahay qof ku dhex jira saadaasha hawada. Waxay kaa caawin doontaa inaad si fiican u barato xogta doorsoomayaasha.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkaan aad go'aansato inaad ku soo gasho adduunka saadaasha hawada oo aad wax badan ka ogaato.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Qalabka Saadaasha hawada » Oregon Scientific
Qaabka atomiga ee Bohr